Nwee ezigbo Gozo, nke a maara dị ka Calypso Isle
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nwee ezigbo Gozo, nke a maara dị ka Calypso Isle
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Gozo - LR - Ġgantija Temple, Ramla Bay, Citadell - foto niile © Viemalta.com
Nwanne nwanyi mara mma nke Malta nke Gozo bu otu n'ime agwaetiti Mediterranean nke mebere agwaetiti Maltese. Gozo bụ nke abụọ kachasị ukwuu na agwaetiti atọ a na-ebi na Malta, ọ dịkwa ntakịrị karịa na ime obodo karịa Malta ma ọ bụghị ndị njem nleta juru. Akụkọ ifo bụ akụkụ dị mkpa nke agwaetiti ahụ na Gozo kwuru na ọ bụ ebe obibi nke akụkọ ifo Calypso, nymph si Homer's Odyssey. Ezigbo, agwaetiti dịpụrụ adịpụ mara maka forgantija Megalithic Temple mkpọmkpọ ebe, osimiri mara mma, na saịtị mmiri na-enweghị atụ.
Zolọ arụsị Gozo Chineke
Ġgantija Megalithic pleslọ Nsọ Ġlọ arụsị Ġgantija bụ ntọala mbụ nke ụlọ arụsị Megalithic mejupụtara saịtị UNESCO World Heritage. Wuru n'etiti 3600 na 3200 BC, a na-ahụta saịtị ahụ dịka otu n'ime ihe ncheta kacha ochie na-akwụghị ọtọ n'ụwa, na-ebute Stonehenge na pyramid Egypt.
Akụkọ banyere Gozo & Calypso Ọgba Calypso
A na-eche na saịtị ahụ bụ otu ọgba Homer ahụ a kpọtụrụ aha na Odyssey, bụ ebe nymph mara mma Calypso na-edebe Odysseus dịka "onye mkpọrọ nke ịhụnanya" ruo afọ asaa. Ogba ahụ na-eleghara ọmarịcha Ramla Bay nke nwere ike bụrụ ihe na-akpali akpali maka ụlọ akụkọ ifo nke Calypso.
"Island of Godeses"
Katidral Gozo: Wuru na saịtị nke ụlọ nsọ ndị Rom raara nye chi nwanyị Juno
Pleslọ arụsị :gantija: N’oge ochie, a sịrị na ụlọ arụsị ndị a raara nye chi nwanyị dị na Ggantija dọtara ndị njem si n’agwaetiti ahụ, na North Africa na Sicily.
Citadella Clọ elu Victoria bụ etiti agwaetiti Gozo. Echere na ọ bụ akụkụ Medieval nke Victoria, a kwenyere na mpaghara ahụ bụ nke izizi ewusiri ike n'oge Bronze Age. Obodo ewusiri ike nke akụkọ ihe mere eme na-eguzo n'elu ugwu dị larịị, nke a na-ahụ anya site n'agwaetiti niile.
Lọ Mkpọrọ ochie N'ụlọ mkpọrọ ochie ahụ, nke dị na Citadel nke Victoria, rụrụ ọrụ dị ka ọnụ ụlọ ọnụ na narị afọ nke 19 ma ugbu a na-egosi ihe ngosi echekwara nke ọma na mgbidi. Mgbidi dị na Mkpọrọ Mkpọrọ nwere nnukwu akwụkwọ graffiti kachasị mara na Maltese Islands.
Marsalforn Nnu Efere Ejiri oke nnu nnu dị afọ iri atọ na ise na-asọba n'oké osimiri. N’oge ọkọchị, a ka nwere ike ịhụ ndị obodo ka ha na-efopụ kristal nnu.
Ihe uto nke Gozo
Agwaetiti Gozo na-enye ihe omume gastronomic pụrụ iche kwa afọ, site na ị wineụ mmanya na ịnwale nri pụrụ iche nke mpaghara. Gozitan nri na-akwado ndị obere na ndị obodo, na-enye ndị ọbịa ezigbo gourmet ahụmahụ. Obere efere bụ ụfọdụ n'ime nri pụrụ iche Gozo, gụnyere ọkacha mmasị mpaghara, Gbejniet (chiiz mmiri ara ehi ọdịnala ọdịnala), na Pastizzi (obere achịcha dị iche iche). Mmanya Gozitan na biya biya nwekwara ike ịgbakwunye ọ liquidụ mmiri mmiri na nleta gị.
Ihe omume Gastronomic
World Renown Divers 'Paradise & Mara mma osimiri
Dwejra Dive saịtị
Oke Osimiri Inland
Oke osimiri aja aja ama ama
Ọdọ Mmiri Ramla
Site na isi agwaetiti Malta, buru Gozo Ferry site na Harkewwa Harbor, na isi ugwu nke Malta maka ihe ngosi 25 nke na-agafe Mġarr Harbor, onu uzo nke Gozo. Ọrụ ụgbọ mmiri bu ndị njem na ụgbọ ala na-agba ọ bụla nkeji iri anọ na ise n'ehihie na mgbe niile n'abalị. Ozugbo ị gara Gozo, ịnwere ike iburu ụgbọ ala ma ọ bụ jiri igwe kwụ otu ebe gbaa gburugburu agwaetiti ahụ. Tripsgbọ njem na njem njegharị ụgbọ ala na-eduzi bụkwa nhọrọ iji rụọ ọrụ nke ọma Gagharịa gburugburu Gozo.
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi maka ịchebe kachasị dị egwu nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage Sites na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta nke ndị Knights St St. ahụ dị mpako wuru bụ otu n'ime nlegharị anya UNESCO na European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnobi nke Malta na okwute sitere na ụlọ okwute kachasị ochie na-akwụghị ụgwọ ọ bụla n'ụwa, rue otu n'ime Alaeze Britain kachasị egwu. usoro nchebe, ma gunyere ngwakọta nke ụlọ, okpukpe na owuwu ndị agha site n'oge ochie, ochie na oge oge a. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma, na afọ 7,000 nke akụkọ na-akpali mmasị, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com
A na-ewepụ agba Gozo na isi ya site na mbara igwe na-enwu gbaa n'elu ya na oke osimiri na-acha anụnụ anụnụ nke gbara ya gburugburu n'ụsọ oké osimiri ya, nke na-echere ka a chọpụta ya. N'ịbụ onye akụkọ ifo, Gozo na-eche na ọ bụ akụkọ ifo Calypso nke Homer's Odyssey - nke udo, nke miri emi. Churcheslọ ụka Baroque na ụlọ ebe ochie na-akọ ugbo n'ime obodo. Okirikiri ala Gozo dị larịị na oke osimiri mara mma na-echere nyocha na ụfọdụ saịtị kacha mma kacha mma na Mediterenian.
Ozi ndị ọzọ banyere Malta.
Ndị Nkọwa Mgbasa ozi:
Malta Tourism Authority - North America
MTA US / Canada Kpọtụrụ ndị na-ahazi:
Ndị otu Bradford